မြတ်သောအလှူဆိုတာ… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » မြတ်သောအလှူဆိုတာ…
Posted by kai on Dec 9, 2010 in News, Society & Lifestyle, Think Tank |9comments
ဖေ့ဘုတ်တည်ထောင်သူတဦးဖြစ်တဲ့ မတ်ခ့်က သူပိုင်တဲ့ ငွေအကုန်လိုလိုကို လှူပစ်လိုက်တဲ့အကြောင်းပါ..။
အသက် ၂၆ နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့ မတ်ခ်ဟာ ဒေါ်လာ သန်း၇ထောင်လောက်ချမ်းသာသူဖြစ်ပါတယ်။ လှူလိုက်တဲ့နေရာကတော့ မိုက်ကရိုဆော့ဖ်တည်ထောင်သူ ဘီလ်ဂိတ်နဲ့စတော့မားကတ်သူဌေးကြီး ဘူဖေးတို့ထောင်ထားတဲ့ The Giving Pledge ပါတဲ့..။
မြန်မာဘီလီယန်နာတွေလည်း ..ဒါမျိုးလုပ်ရင်ကောင်းမယ် တွေးမိတာပါပဲ..။
ကိုတေဇ။ မက်စ်ကိုဇော်ဇော် တို့ရေ..။ အင်္ဂလိပ်ခေတ်ထဲကနေ အခုထိ ဒီအတိုင်းဖြစ်နေသေးတဲ့ မြန်မာပြည်ကဆေးရုံတွေကို ရှိတာတွေထဲက နည်းနည်းမျှလှူကြပါလို့ တိုက်တွန်းပါတယ်ခင်ဗျား..။
At only 26 years of age, Mark Zuckerberg is one of the world’s youngest billionaires, but he’s not keeping it all for himself. By signing on to Bill Gates and Warren Buffet’s initiative called the “Giving Pledge,” Mark agreed to give most of his wealth to charity.
This is not Zuckerberg’s first foray into philanthropy; he donated an undisclosed amount to the open social network project Diaspora as well as $100 million to Newark Public Schools. He spoke about the Newark donation on Oprah, explaining his dedication to help fix the public school system.
The Giving Pledge, however, isacompletely different ball game. Along with 57 other multi-millionaire and billionaire families and individuals, including Warren Buffet, Bill Gates, Paul Allen and Carl Icahn, by signing the pledge Zuckerberg promised to give more than half of his wealth to charity, either during his lifetime or after his death.
According to Forbes’ estimate, Zuckerberg is worth $6.9 billion, which makes him the 35th most wealthy Americans. Although many consider him to be the world’s youngest billionaire, he recently lost that title to FacebookFacebook co-founder Dustin Moskovitz, who is only eight days younger than him and whose worth is currently estimated at $1.4 billion.
တော်ရုံ သတ္တိနဲ့တော့ မစွန့်နိုင်ဘူးနော် ။ ဒါမျိုးလှူတာကမှမိုက်တာ … ။
စိတ်ကောင်း တော်တော် ရှိတဲ့ သူပဲ။
သာဓု သာဓု သာဓုပါခင်ဗျာ~~~~
ညံညာပီက တထေးတွေလဲ လှူရန်စိတ်များတဖွားဖွားပေါ်လာပါစေ~~~~
ဒီတိုင်းပြည်က လူတွေ ကိုယ့်ဟာကို လှူလို့တောင် မ၀ဘူး.. အဲ.. အမှန်တော့.. သူတို့လို လူချမ်းသာတွေက ဖောင်ဒေးရှင်းလေး တခု ထောင်ပြီး အများ အကျိုး ဆောင်ရွက်မယ်ဆို သိပ်ကောင်းမှာ.. ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်.. အလှူ တခုဆိုတာ အကြောင်း ၅ချက် တိုက်ဆိုင်မှ လှူလို့ရတာ။
မိမိကိုယ်ကို လူလို့နားလည်သတ်မှတ်ထားတဲ့သူတွေက လူသားတွေကိုတန်ဘိုးထားကြတယ် .. ကိုယ်မှန်စိတ်မှန်ရှိကြတယ် ..
လှူတန်းမှု နည်းပညာ သင်တန်းဖွင့်ပေးရင်ကောင်းမယ်